Iincwadi zokuThengisa kunye noPhononongo | Martech Zone
Iincwadi zokuthengisa kunye nokuphononongwa kweencwadi kwi Martech Zone
Kutheni le nto kufuneka ufunde izakhono zobuchwephesha njengoMphathi weCRM? Kwixesha elidlulileyo, ukuze ube ngumphathi wobudlelwane noMthengi olungileyo ubudinga kwisayikholoji kunye nezakhono ezimbalwa zentengiso. Namhlanje, iCRM ingaphezulu komdlalo wobuchwephesha kunasekuqaleni. Kwixesha elidlulileyo, umphathi weCRM wayejolise ngakumbi kwindlela yokwenza ikopi ye-imeyile, umntu onengqondo yokuyila ngakumbi. Namhlanje, ingcali yeCRM elungileyo yinjineli okanye ingcali yedatha enolwazi olusisiseko
NgeCawa, ngoFebruwari 3, 2019 NgeCawa, ngoFebruwari 3, 2019 Douglas Karr
Ukuqala kwam ukudibana noMark Schaefer, ndandiwazisa kwangoko amava akhe kunye nokuqonda okunzulu. UMark usebenza neenkampani ezikhokelayo kwindlela yokuphucula iinzame zabo zokuthengisa. Ngelixa ndiyingcali efanelekileyo kolu shishino, ndijonge kwiinkokheli ezimbalwa ngombono-uMark yenye yezo nkokheli endiziqwalaselayo. Ngelixa uMarko ligqala elinamava kwezentengiso, ndaye ndayixabisa into yokuba watsibela entloko kuqala